All the difference in the world - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on September 3, 2017 at 17:45 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
"There always room forastory
transport people to another
စိတ်အပြောင်းအလဲလေး တစ်ခုဖြစ်အောင် ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်လောက်ပြောပါရစေဗျာ...
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့အတွက် သိကျွမ်းပြီးသား ပုံပြင်ဟောင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာပါ
(ဒီပုံပြင်လေးဖတ်ပြီး စာဖတ်သူစိတ်ထဲ ရသ တစ်ခုခု စွဲကျန်ရစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီဗျာ)Linn Sat
တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ မနက်တိုင်း ကျနော့် အိမ်နားမှာရှိတဲ့ ပန်းခြံထဲမှာ ပုံမှန် ပြေးလေ့ရှိပါတယ်....
အဲ့ဒီပန်းခြံရဲ့ ထောင့်တစ်နေရမှာတော့ေ
ရကန်လေး တစ်ခုရှိပြီး ဒီရေကန်လေးကို ကျနော် ပတ်ပြီး ပြေးနေစဉ်အတွင်း ရေကန်အစပ်မှာ သတ္တုလှောင်အိမ်ကလေး တစ်ခုကိုင်ပြီး ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ပုံမှန် မြင်တွေ့နေခဲ့ရတာပေါ့
တနင်္ဂနွေတစ်ရက်မှာတော့ ကျနော်ရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ် သိချင်စိတ်ကို မတားနိုင်တော့ဘဲ ပြေးနေတာကိုရပ်ပြီး အမျိုးသမီးရှိရာ ရေကန်စပ်ကို သွားခဲ့လိုက်တယ်။
အမျိုးသမီးနဲ့ နီးကပ်လာတဲ့အခါ ကျနော် မြင်လိုက်ရတဲ့ သတ္တု လှောင်အိမ်ဆိုတာ တကယ်တော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ထွက်ပြေးလို့မရအောင်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်ငယ်ကလေးဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်တယ်.....
အဲ့ဒီလှောင်အိမ်ကလေးထဲမှာ ပင်လယ်လိပ်လေး(၃)ကောင်က ဖြေးညင်းစွာလှည့်ပတ်သွားနေပြီး (၄)ကောင်မြောက် ပင်လယ်လိပ်ကိုတော့ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ပိုက်ထွေးထားပြီး spongy brush နဲ့ ဂရုတစိုက်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတာပေါ့
ကျနော်လည်း အမျိုးသမီးဆီကို သွားပြီး မိတ်ဆက်လိုက်တယ်
.တနင်္ဂနွေ မနက်တိုင်း မင်းဒီမှာထိုင်နေတာ ငါအမြဲတွေ့တယ်
မင်း စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ဒီ ပင်လယ်လိပ်တွေနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ ငါ့ သိလို့ရနိုင်မလားလို့"
ဆိုပြီး ကျနော် ပြောလိုက်တယ်...
"သူတို့ရဲ့ အခွံ တွေကို ငါ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနေတာပါ " ဆိုပြီး အမျိုးသမီးက ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေတယ်... တဆက်တည်း သူက ဆက်ရှင်းပြတယ်
"လိပ်အခွံပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတိုင်းဟာ ရေထဲမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ ရေညှိရေမှော် တွေကြီးပဲ"
ဒီအညစ်ကြေးတွေက လိပ်ရဲ့ အပူစုပ်ယူနိုင်တဲ့ စွမ်းအားကို လျော့ကျစေပြီး ရေကူးနိုင်စွမ်းကိုလည်း ကြန့်ကြာတတ်အောင် ဒုက္ခပေးတတ်တယ်လေ...
ကြာလာရင် သူတို့အခွံတွေက တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာပြီး တမြည့်မြည့် ပျက်စီးတော့တာပဲ"
ဒါကြောင့် ငါဒီမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနေရတာပေါ့.....
"ဝိုး..... မင်းနဲ့တွေ့ရတာ အရမ်း အံသြဖို့ကောင်းတာပဲ" ဟု ကျနော်လည်း ပြန်ပြောမိလိုက်တယ်"
ဒီလိုနဲ့ တနင်္ဂနွေမနက်တိုင်း ရေကန်စပ် မှာ လိပ်ကလေးတွေကို (၂)နာရီလောက် သူမနဲ့အတူ ကူညီ သန့်ရှင်းပေးပြီး လိပ်ကလေးတွေကို ရေကန်ထဲလွှတ်ပေးပြီးနောက် သူမ ပြန်သွားလေ့ရှိပြီး ဒီအပြုအမူလေးက ကျတော့်စိတ်ကိုလည်း အေးချမ်းစေတယ်
ဒါကတော့ ကျနော့်နဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ထူးထူးခြားခြား လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို စတင်အစပျိုးလိုက်ခြင်းပါ....
"ဒါနဲ့..... ရေချိုလိပ်အများဆုံးဟာ သူတို့ရဲ့အခွံမှာ ကပ်ညှိနေတဲ့ ရေညှိနဲ့အညစ်အကြေးတွေကြောင့် သူတို့ ဘဝတစ်လျောက်လုံး အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြပါ့မလား" လို့
"နေထိုင်နိုင်ကြမှာပါ... သူတို့လုပ်နိုင်မှာပါ"ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။
"ကောင်းပြီ..... မင်းရဲ့အချိန်တွေကို ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ မစဉ်းစားမိဘူးလား??" ငါဆိုလိုတာက
" မင်းမှာ အားလုံးကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ် ရှိတယ်...
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ရေကန်ထဲမှာလည်း ဒီလိုလိပ် တွေ နေထိုင်နေကြတယ်လေ" ပြီးတော့
ဒီလိပ်တွေရဲ့ ၉၉ %လောက်ကို မင်းလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အခွံတွေကို ကြင်နာစွာကူညီသန့်ရှင်းပေးပြီး လုပ်ပေးနိုင်မယ်သူမျိုး ရှိမှာမဟုတ်ဘူး"
"မင်းရဲ့ဒီလိုကွက်ကြားမိုး ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေက ဘယ်လိုများ ပိုပြီး ထူးလာမှာမို့လို့လဲကွာ။"
အမျိုးသမီးက အသံကြားရုံလောက်တခစ်ခစ်ရယ်မောလိုက်ပြီး ရင်ခွင်မှာပိုက်ထားတဲ့ လိပ် ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်...
ပြီးတော့ အခွံပေါ်ကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ရေညှိအချို့ကို ရှင်းလင်းပြီး သူမက လိပ်ကလေး ကို ပြောလိုက်တယ်'...."
"လိပ်ကလေးသာ စကားပြောတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မင်းကိုသူက ပြောလိမ်မယ်..."
"ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်အားလူံးကို ငါက ပြုလုပ်ပေးချင်တာပဲ ရှိတာပါကွာ"
"Let yourself believe that you have the full right to go after your heart's desires and dreams!
The Moral - You can change the World.
> ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလေ
>ဒါပေမယ့် တစ်ဦးတစ်ယောက် / တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ခဏအတွင်းမှာ မိမိရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြုမှုလေးကို ဆောင်ရွက်ရင်း ကမ္ဘာကြီးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်....
Linn Sat (Sep /3/ 2017)
Ref: All the difference in the World Written by MARC CHERNOFF
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on September 4, 2017 at 15:34
အမယ် စာတွေ ဘာတွေ ပြန်ရေးနေပြီလားဟ ။ ခုဘယ်တွေရောက်ပြီး ဘာတွေလုပ်နေတုန်း....
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on September 4, 2017 at 19:48
ငါ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီ ခုတော့ စာတွေပြန်ရေးနေပြီ
ပြတ်နေတာကြာတော့ စာရေးရတာ အဆင်မပြေသေးဘူး သူငယ်ချင်းရေ